DHIBAATO WAX KU OOL AH OO KU SAABSAN CALEEN-WEYNTA PEAR - KU'SAABSAN
Sida loo aqoonsado cayayaan
Qalabka waraaqaha (Tortricidae Latin ama Olethreutidae) waa qoys u ah dhicin, oo leh in ka badan 1000 caanaha iyo 10,000 nooc oo cayayaanka ah.
Qofka qaangaarka ah wuxuu u eg yahay aboor ama midab leh midabyo kala duwan, oo ku dhow cagaarka-brown, oo leh garbaha oo aan ka badneyn 2.5 cm jirka iyo baalasha baalalka ayaa la daboolay timo iyo ubax cawl. Raadhisyada cayayaanka ayaa gaari 2 cm oo dherer ah, waxay leeyihiin 8 laba lugood oo aan ku dhoweyn wax daboolaya jirka jidhka oo leh dhif iyo naadir. Midabka lafuhu wuxuu ka iman karaa huruud ah-casaan ilaa cagaaran, madaxa waa madow ama bunni. Waa maskaxda duufanta ee sababa waxyeelo weyn u leh dhirta. Isteroberi waa noocyada khatarta liisaska ee liistada: roodhida, tufaaxa, boodhka, roodhida, bariiska, geedkii, rosacea, hawada iyo barafka.
Cunista caleemaha, dirxiga ayaa ku duubi tuubooyin ama u rogaan buro aan shuba lahayn. Haddii cayayaanka la boogo, waxay u egtahay mid cidhiidhi ah, ka soo baxaya caleenta iyo walxaha ku wareegsan xargaha cirifka.
Baro sida loo ciribtiro cayayaanka kale ee beerta: caarada galleyda, dahabka dahabka ah, boodboodka, abeesada, cockchafer, scoops, boodboodka, tsikadki, qoob-ka-ciyaarka, riwaayadaha, weevil ba'an, jiir, aphids, shitano, baradhada baradhada Colorado, dhegaha.
Cayayaanka yaryar ayaa awood u leh in ay burburiyaan dalagga oo idil, cunista caleemaha yar yar iyo in aanad u oggolaan in burooyinkeeda ay bilaabaan inay isqabaan. Heerka jilicsanaanta jiilaalka ee dhirta ay ku dhacdo cayayaanka ayaa si weyn hoos loogu dhigaa. Waxaa intaa dheer, waxqabadka muhiimka ah iyo burburinta riwaayadku waxay ku bilaabmaysaa dhalaalid guga waxayna socotaa xilli-kulaylka oo dhan.
Guga, lafdhabarta ayaa weerara inflorescences, waxyeeleynaya burooyinkeeda iyo burooyinkeeda, iyaga oo ku dhirbaaxaya cagwadi. Dabadeed, waxay u guuraan caleemaha, iyaga oo isku duubaya si ay u sameeyaan kookaha iyagoo gacan ka helaya cantoobada. Cayayaanka ayaa bilawga hore bilaabmaya. Laba toddobaad kadib, dhicin ayaa soo baxaya. Inta lagu jiro hal xilli, cayayaanka ayaa soo saari kara dhowr jiil. Qaangaarka noocyada qaar (sida rosacea, hawo goyska ah iyo dhaxan) xagaaga xagaaga oo ukumo ku ridaan pear sanadka soo socda. Qaar ka mid ah xayawaanku waxay ka badbaadaan jiilaalka si badbaado leh, iyaga oo ka tagaya koofiyado meelaha dillaacsan ee jilif ama laanta geedka.
Ku guuleysiga tirooyinka sare, cayayaanka ayaa burburiya miraha ay bislaan.
Ma taqaanaa? Si la mid ah caarada, xayawaanku waxay qarsoodi karaan xadhig ka kooban laba qanjidho oo qarsoodi ah. Xakamaynta qarsoodiga ah marka la xirriirayo hawadu waxay samaysaa xargaha lagama maarmaanka u ah dhismaha qumbaha, xakamaynta caleemaha ama dharka gacmaha.
Mid ka mid ah calaamadaha dhaawaca ee cayayaanka khatarta leh waa dareere xajmi ah oo hoos u dhigaya laamaha iyo jir. Astaamaha kale ee muhiimka ah waa caleemaha isku dhejin kara xididka dhexe. Waxay bilaabaan inay madoobaan, noqdaan kuwo madow.
Gudaha tuubooyinka caleemaha waa dirxiga cayayaanka, soocidooda iyo haraadiga qashinka ee baalalka loo soo dhejiyey. Miraha ay saameeyeen caleen gudaheed ayaa laga yaabaa inay sii xanuunsanaan karto cudur sida caleemaha miro, sidaa daraadeed, waa lagama maarmaan in laga takhaluso cayayaanka calaamadaha ugu horreeya ee ay dhacaan.
Cayayaankaasi wuxuu awood u leeyahay burburinta 80% dalagga iyo in ka badan kala badh caleemaha geedaha, haddii tallaabooyinka hallaaga aan la qaadin.
Waa muhiim! Qaadashada pear-ka, dhagxaanta waxay u ekaan kartaa geedaha midhaha kale ee u dhow, sida geedka, plomka, haweenka, cherry shimbir iyo kuwo kale oo badan. Sidaa darteed, si loola dagaallamo cayayaan waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo wax beerta buuxda.
Ka hortagga iyo halganka "firfircoon" ee cadowga
Sida muuqata aboor ku saabsan pear waa buuq weyn oo loogu talagalay beerta kasta, sidaas darteed waa muhiim in la fahmo tallaabooyinka ka hortagga ah ee loo isticmaali karo si looga hortago muuqaalka sida loola macaamilo, haddii dhibaatadu horay u muuqatay marka loo eego geedaha geedaha iyaga oo aan waxyeello dhirta.
Guga hore, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo jilibka geedaha ka soo jeeda jajabyada dushooda iyo daaweyn shakhsiyadaha leh xal caano ah iyo sulphate copper ama Karbofos (2%). Aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo pearka waxyeello farsamo iyo dufan barafoobay. Kiimikada ilkaha ee ugu horreysa waxaa si toos ah loo sameeyaa ka dib marka la nadiifiyo iyo geedaha cad, ka hor intaan la shubin. Heerkulka hawada ee wanaagsan ee falanqaynta waa in uu ka sareeyo 10 ° C si ay u diraan dirxiga, oo qarinaya qoto dheer ee jilif ka soo qabow, si ay u soo baxaan. Moobeylka ugu horeeya, iyo sidoo kale laba ka mid ah kuwa soo socda - ka hor iyo ka dib ubax, waxaa lagu fuliyaa diyaarinta "Kinmiks" iyo "Decis".
Ka hor inta ubax, daaweynta waxaa sidoo kale lagu fulin karaa by: "Atom", "Di-68", "Rogor-S", "Landing", "Zolon". Inta lagu jiro xilliga koritaanka iyo daaqa ee miraha, marka lagu daro sunta cayayaanka, daaweynta waxaa lagu fulin karaa: "Tsitkor", "Fury", "Kemifos", "Iskra", "Karbofos".
Xilliga dayrta, ka dib marka caleen dayrta, caleemaha u baahan tahay in la soo uruuriyo, ka furfurmeen dhulka wareegga xuduudaha u dhow iyo geeddi-socodka pears iyo ciidda iyaga ka hooseeya leh copper sulphate ama Bordeaux isku dar ah.
Nabadgelyada dhirta oo dhan, oo ay ku jiraan pears, waa daryeel dhammaystiran iyaga. Dalagyada la liito, bukaanka ah ama la dayacay waxay noqdaan dhibbanayaasha cudurada iyo cayayaanka. Aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo agrotechnology, dhirta waqtigeeda, manjooyin, waraabinta iyo bacarimiso dalagyada beerta.
Taajka pear waa inuusan korin kumbuyuutarka, iyo qadarka qoyaanka iyo labiska ma noqon karaan kuwo xad dhaaf ah ama wax ka maqan, maadaama ay tani dhaawici doonto geedka.
Waa muhiim! Ciidda xayndaabyada pristvolnyh waa inay noqdaan dabacsan, oo aysan ku jirin haramaha soo jiidata cayayaanka. Nadiifinta nidaamsan ee caleemaha dhacday iyo miraha, gaar ahaan kuwa ay saameeyeen cayayaanka, waxay xadidi doonaan qaybintooda beerta.
Ururinta nidaamsan ee caleemaha iyo miraha oo idil inta lagu jiro xilliga xagaaga, ka saarista caleemaha ku dhuftay caleemo la'aan, ruxin dirxiga caleemaha, gooyo dabinka iyo xirashada suunka daboolka leh xayndaabyada xayirista waa tallaabooyin xakameyn cayayaanka khasab ah si loo ilaaliyo dalagga.
Habka bayoolojiga la aqbali karo ee la dagaallanka diiriyadu waa inay soo jiidato shimbiraha goobta cadowga dabiiciga ah.
Habka ugu wax ku oolka ah ee wax uga qabashada baalalladaha iyo balanbaalisyada dhaadheer waa kiimikada. Si kastaba ha noqotee, laba qodob ayaa muhiim ah in la tixgeliyo:
Diyaargarowga waa in loo bedelaa sababtoo ah cayayaanka si dhakhso ah u la qabsashada sunta kiimikada kiimikada;
maaddooyinka sunta ah, oo ku noolaanaya midhaha, waxay geli karaan jidhka bini'aadamka.
Si aad uhesho habkan kantaroolka xayawaanku waa lagama maarmaan haddii tiradooda ay ka sarreyso heerka xaddiga halista ah - marka dad ka badan 5 qof oo waxyeello leh laga helo hal laan.
Waa muhiim! Waa in la xusuusnaado in daaweynta la sameynayo heerkul aan ka yarayn 10 ° C waxayna dabooli kartaa dhulka oo dhan beerta, tan iyo aboorka si fudud u dhaqaaqo dhirta.
Waxyaabaha ku habboon bayoolojiga waxaa ka mid ah: "Bitoxibacillin", "Lepidotsid", "Fitoverm". Noocyada ugu caansan ee loo isticmaalo pyrethroids ayaa loo adeegsadaa lidka loo yaqaan "Fastak", "Qi-Alpha", "Accord", "Ivanhoe", "Alfatsin", "Fatrin". Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka hababka noocaas ah waa suurtagal: "Karate Zeon", "Kungfu", "Sensei", "Karachar", "Lyambdeks", waa in la xusuusnaado in marka heerkulka hawadu ka sareeyo 25 ° C, waxtarka daawooyinka pyrethroid si weyn loo yareeyo, iyo kicin jiritaanka dillaaca taranka.
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro 56 maalmood ee ugu horreeya noloshooda, siiyay waxay awoodaan in ay cunaan dhir aad u badan in cabbirkoodu kor u kaco 20,000 jeer miisaanka bilowga ah inta lagu jiro muddadan.
Wixii daaweyn ah dadweynaha si loola dagaallamo buug-yarahaan, u isticmaal adeega sida ugu sahlan uguna waxyeello u leh bani'aadamka:
faafidda tubaakada - 500 g oo ah tubaakada tubaakada waa in lagu shubo 10 litir oo biyo ah karkaraya, ku adkeyso 24 saacadood, cadaadis iyo ku shub biyo kuxad ah 1: 1. Isla markiiba isticmaalka 10 litir kasta oo ka mid ah xalalka soo baxay, ku dar 50 g oo ah dareeraha ama saabuun la jajabiyey. Ha u ogolaan in la cuno faleebo xuubka, sababtoo ah sunta;
decoction ee Gooryaanka - 800 g oo ah geed cawska qallalan oo ku shub hal baaldi biyo ah kuna adkeyso laba maalmood. Ka dibna isku kari ilaa nus saac, qabow oo maraq keena mugga 10 litir. Isla markiiba isticmaalka, ku mil biyo 1: 1.
faleebo baradho - 4 kg oo ah mid cusub ama 2 kg oo caarad qallalan oo ku dar 10 litir oo biyo diirran ah, u diyaarsan 4 saacadood. Ka dibna adkee oo ku dar 40 g saabuunta dareeraha.
decoction ee dufanka yaanyada - 4 kg oo dushooda cusub iyo xididdada ku shub 10 litir oo biyo ah, ka bax inaad istaagto 4 saacadood, ka dibna karkari ugu yaraan saacad badh. Cool iyo cadaadis. Ka hor intaadan isticmaalin, ku mil biyo 1: 1 iyo ku dar 40 g saabuun.
Xogta wax ku oolka ah ee xilliga ka hor ama ka dib ubax.
Qabsiyada kareemka waxaa laga sameeyaa kvass rooti, ​​khudradda miro qallalan ama macmacaan la jarjaray oo la buuxiyey seddexaad oo ka mid ah dhirta dhererka ugu yaraan 1.5 mitir habeenkii. Dabinnada subaxda waa in laga saaraa si looga fogaado in ay ka baxaan cayayaanka faa'iido leh.
Ka-hortagga iyo xakamaynta waraaqaha waa inay noqdaan kuwo dhamaystiran, dhamaystiran oo waqtigooda ku habboon. Tani waxay gacan ka geysan doontaa ilaalinta caafimaadka geedaha beerta waxayna ilaalin doonaan midhaha beerta.